Uninzi lwamanqaku ahlaziyayo ehlobo anikezelwa ngamaqonga | Bezzia
USusana godoy | 21/06/2022 14:00 | Iindaba
Sihlala sithanda uchungechunge lwehlobo xa eli xesha lifika. Kanye njengokuba sithanda ukuntywila kwixesha leKrisimesi ekupheleni konyaka, ngoku sitshintsha yonke into yezo ndawo zeparadesi, ezo lwandle zikhulu kunye nemozulu entle. Ke, ukuba awukabi nalo iholide, unokuthanda ukonwabela ezinye iindlela ezinikezelwa ngamaqonga.
Ekubeni zigqibelele ukuba zenze umdla wakho iiholide zehlobo elizayo sele zikufuphi. Uchungechunge lwasehlotyeni esilufumeneyo luneeploti eziya kubamba ukuba ufuna ukonwabela iintlobo ezahlukeneyo zemixholo. Ke, lixesha lokubheja nganye nganye kwezi sizikhankanya ngezantsi.
1 ihlobo endathandana ngalo
3 umngeni wehlobo
4 Ixesha lasehlotyeni
ihlobo endathandana ngalo
Olunye uthotho ekuthethwa ngalo kakhulu lolu. Ngokuba 'Ihlobo endathandana ngalo' lelinye lamabali olutsha ahlala edibanisa. Luhlengahlengiso lweencwadi zikaJenny Han kwaye kweli bali singonwabela imixholo enjengothando lokuqala kodwa nobudlelwane phakathi komama nabantwana kunye nekhosi yexesha lasehlotyeni kunye nazo zonke izithako ezisishiyayo ukuze sizenze zibe zezona zibalaseleyo. . Kakade ke, ukuba sigxininisa ngakumbi kwingxabano yakhe, kufuneka kuthiwe ngunxantathu wothando owenziwe ngumfazi oselula kunye nabazalwana ababini. Sele unayo kwi-Amazon Prime kwaye ewe, yenye yezibonelelo ezinkulu zokuqalisa ukuphila ukusukela ngoku.
Phakathi kweechungechunge zasehlotyeni sikwafumana amachibi ukuze akwazi ukupholisa njengoko sifanelwe. Kwakhona kufuneka siyikhankanye loo nto Uya kuyifumana kwi-Amazon Prime kwaye kule meko yinto ehlekisayo, enezahluko ezimfutshane ezibonwa ngokukhawuleza. Sikubeka kweli nqaku: Imalunga nendoda ekudala ihlala phesheya, de ngenye imini yagqiba kwelokuba ibuyele eKhanada ukuze idibane nentombi yayo awayincama ukuba ikhuliswe. Kodwa uyaqonda ukuba asiyiyo yonke into eya kuba ntle njengoko ebelindele, ekubeni kukho ilifa elingahambi njengoko ebelindele. Ngoku kuya kufuneka uyibone iphelele ukuze ukwazi ukufumanisa ukuba iphetha njani.
Luthotho lweziqendu ezili-10 kwaye ukuba uyathanda ukusefa, awungekhe uyiphose. Bekusekuqaleni kuka June 'Umngeni wasehlotyeni' ufike kwiNetflix. Kuyo unokuyonwabela imihlaba yaseOstreliya kwaye kunjalo, iilwandle zayo. Ngaphandle kokulibala ukuba sikwajongene nedrama yolutsha kuba umlinganiswa oyintloko iHlobo. Ibhinqa eliselula elinemvukelo ngandlel’ ithile liyagxothwa kwisikolo samabanga aphakamileyo eNew York. Kungoko umama wakhe emthumela kwidolophu encinane. Singasoloko simnika ithuba lokuba abone ukuba eli bali liphela njani, awucingi?
Kwakhona sihlala kwiNetflix ukonwabela olu lunye uthotho. Njengoko sibona, umxholo wayo usixelela okungakumbi kunokuba besinokulindela. Imozulu entle nomsebenzi wasehlotyeni wenza iqela labantu abaselula lazane. Aba bane bahluke kakhulu kodwa bamanyene ngenxa yendawo yobumnandi kunye neparadesi yesiqithi. Ke, zizithako ezigqibeleleyo zokuqhubeka nokubheja kolunye uthotho oluya kuhlaziya eli xesha lonyaka. Okwangoku ineziqendu ezisi-8 kunye nesizini enye. Kodwa ngokwaneleyo ukuba ukwazi ukufumana zonke iimfihlo abazifihlayo kunye nokufika kothando. I-cocktail eya kuhamba indlela ende kwaye awukwazi ukuyiphosa. Loluphi uchungechunge lwehlobo olubonileyo?
Umendo opheleleyo kwinqaku: IBezzia » Iindaba » Uninzi lweechungechunge ezihlaziyiweyo zasehlotyeni ezinikezelwa ngamaqonga